KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Xaaladda Degmadda Kaaran oo deggan kadib Dagaallo xalay ka dhacay
Sunday 11 March 2012 12:00
Xaaladda Degmadda Kaaran oo deggan kadib Dagaallo xalay ka dhacay
Muqdisho(Keydmedia) - Kadib Dagaallo iyo Duqeymo xalay ku dhexmaray Ciidamada TFG-da, AMISOM oo isku dhinac ah iyo Maleeshiyaadka Kooxda Al-shabab-Qaacidda Duleedka degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa Saakay xaaladdu waxa ay tahay mid deggan.
Sida ay Keydmedia u xaqiijiyeen Goobjoogiyaal, dagaalka Xalay ayaa ahaa mid aad u xooggan oo dhawaqa rasaasta iyo Hubka culus laga maqlayay Xaafadda Argantiin oo ka mid ah Degmada Kaaraan iyo Deegaano fog oo Madaafiic dhowr ah ay ku dhaceen.
Wararka ayaa sheegaya inay jiraan khasaaro soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalka iyo dadka rayidka ah,inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah,mana jiraan wax war ah oo ku aadan dagaalka oo kasoo baxay labada dhinac ee dirirtu dhaxmartay illa hadda.
Dadka deegaanka ayaa sidoo kale u sheegay Keydmedia in saaka laga dareemayo Xaalad deganaansho ah Goobahii lagu dagaalmaya Xalay ee Duleedka Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir.
Duleedka Degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa dhowr jeer waxaa kusoo noq noqday dagaal noocan oo kale ah, waxaana dhowr jeer halkaasi weerar ku soo qaaday Kooxda Al-Shabaab ee dhawaan laga saaray Magaalada Muqdisho.